State Counsellor receives Chairman of Board of SN Power of Norway – Ministry of Foreign Affairs
During the meeting, they exchanged views on the possibilities of cooperation between the Government of Myanmar and SN Power Company in hydropower production to meet the needs of energy for the development of Myanmar.
The meeting was also attended by U Win Khaing, Union Minister for Electricity and Energy, U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, and senior officials from the Ministry of Foreign Affairs.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နော်ဝေနိုင်ငံ၊ SN Power ကုမ္ပဏီ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Oystein Oyehaug ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ SN Power ကုမ္ပဏီ၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Oystein Oyehaug ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦး ပါဝင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၉-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ (၁၀:၀၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်နေသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် လုံလောက်စွာ ရရှိရေးအတွက် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် SN Power ကုမ္ပဏီတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အလားအလာများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။